IPanasonic ikwakho nesithethi esihlakaniphile esinoMncedisi kaGoogle | Iindaba zeGajethi
IPanasonic ikwanaso nesithethi esi-smart noMncedisi kaGoogle
URuben inyongo | | ngokubanzi
Amakhaya axhunyiwe kwaye ahlakaniphileyo ngumhla wosuku. Kwimeko yezithethi ezikrelekrele, inyathelo lokuqala lenziwa yiAmazon ngeAmazon Echo kunye nomncedisi weA Alexa. Nangona kunjalo, ukwandiswa kwayo ngaphandle kwe-United States kuyalibaziseka ngaphezulu kwesiqhelo kwaye ngoku kuya kuba nexesha elinzima lokukhuphisana nabanye abenzi. Owokugqibela ukujoyina IPanasonic kunye nemodeli yayo ye-SC-GA10.
Esi sithethi simile ngokuchanekileyo silumkile. Yimodeli enye ethe yaboniswa ngexesha le-IFA kwaye yongeza kuyo Ukubheja kukaSony. Ngoku, njengoko sikuxelele, iimilo zesithethi zigcineke ngakumbi. Nangona ayinamtsalane kangako, ngokuchaseneyo.
Inonxibelelwano lweBluetooth kunye nefayile ye- jack Ukungena kwe-3,5 mm. Oko kukuthi, uya kuba nakho ukudibanisa nawuphi na umthombo wesandi oza engqondweni. Okwangoku, ukuyilawula siya kuba neenketho ezimbini: sebenzisa ulawulo lokuchukumisa ngaphezulu okanye usebenzise usetyenziso oluza kusasazwa yiPanasonic xa isungulwa kwimarike. IPanasonic SC-GA10.
Ngokunjalo, esi sicelo asizukunceda nje kuphela ukuba sonyuse / sinciphise ivolumu okanye siyimise, kodwa nayo le Panasonic SC-GA10 inokusebenza kunye neeyunithi ezininzi. Ke isandi sinokusasazwa ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye ngokucinezela nje kwiscreen esiphathwayo okanye ipilisi.
Ngokumalunga nenxalenye yesandi sobuchwephesha, esi sithethi sihlakaniphileyo Umncedisi kaGoogle unee-tweeters ezingama-20-millimeter kunye ne-8-millimeter woofer. Ukongeza, umenzi ubhekisa kwinto yokuba baya kugubungela iimfuno zoluntu kuba inokunika isandi esingqonge iidigri ezili-180. Njengokuba konke oku akwanelanga, iPanasonic SC-GA10 iyahambelana neenkonzo umchachazo njengeSpotify phakathi kwabanye, ukongeza ekubeni ukwazi ukusebenza ngokudibeneyo neGoogle Chromecast.
Isithethi siza kufika ekuqaleni konyaka olandelayo we-2018. Ungayifumana imibala emibini: mhlophe okanye mnyama. Nangona kunjalo, ngalo mzuzu ixabiso lokuthengisa alikadluli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IPanasonic ikwanaso nesithethi esi-smart noMncedisi kaGoogle
Ikhadi leSandisk elitsha le-MicroSD lisinika i-400 GB yokugcina
INokia 8 ngoku iyafumaneka ukuze ibekelwe bucala eSpain